မြန်မာ အမျိုးသမီးမိန်းကလေးများအနေဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အိမ်ဖော်အဖြစ် မလာရောက်လျှင်ပိုသင့်တော်ပါ၏့ ဤနိင်ငံတွင်အထူးသဖြင့်အများစုမှာအခက်အခဲဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရပါကြောင်း၊့အထူးသဖြင့်နှိမ့်ချဆက်ဆံမှုများအားသည်းခံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုကျွှနုပ်နှင့်သူငယ်ချင်းများကမြင်မိ၍မလာရောက်ရန်အထူးမေတ္တာရပ်ခံပါ၏
အဘ သိန်းစိန်ရေ။ မလေးရှားက မြန်မာကို သာသာနဲ့ နာနာ နိပ်ကွက်လိုက်တာပဲ။ မြန်မာလူမျိုးကို အ်ိမ်ဖော် အဆင့်ထားပီး ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားပေတော့။ မလေးရှားမှာ မြန်မာတွေ က အနှိမ်ခံရတဲ့ လူတန်းစားတွေထဲပါဝင်နေဆဲပါ။ အိမ်ဖော်အနေနဲ့ တော့ မလွတ်ပါနဲ့ ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ လူမျိုးတွေ သိက္ခာကျပါတယ်။ အဘ သိန်းစိန်သာ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ။့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေကို ပညာရေးကို အဓိက ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးပါ။ ယုံကြည်ချက် ခိုင်မာအောင်လဲလုပ်ပေးပါ။ သူများနိုင်ငံမှာ ကျွန်ခံရမယ့်အတူတူ အိမ်ဖော်တော့မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့ ။ မြန်မာ အမျိုးသမီးများကို။ Mar 31, 2012 04:23 AM
မလေးက အိမ်ဖေါ်ဆိုတာ အိမ်က ယောကျာင်္းတွေ အပြင်ထွက်မကမြင်းအောင်လို့ မိန်းမလုပ်သူတွေက လင် ယောကျာင်္းတွေတွက် အိမ်မှာ အဖေါ်အဖြစ်ထားတာက များတယ်လေ။ ကဲ ယောကျာင်္းလေး အိမ်ဖေါ်ဒီကောင်တွေ ခန့် မှာလား မေးကြည့် အိမ်ဖေါ်ဆိုဘာလို့ မိန်းကလေးမှရွေးခန့် တာလဲ။
Mar 30, 2012 06:44 PM
အိမ်ဖော်အလုပ်နဲ့မလာကြပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးသိက်ခါကျတယ် စားစရာမရှိရင်အသေသာခံလိုက်အိမ်ဖော်အလုပ်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ မလေးရှားအစိုးရကမြန်မာကိုအထင်သေးလို့အိမ်ဖော်ခေါ်မယ်ပြောတာပါမလေးရှားအစိုးရကတော်တော်လူလည်တွေနှော် မြန်မာနိုင်ငံလာသွားတဲ့အခုဝန်ကြီးနာဂျစ်လည်တာတောင်မှဖျင်ဘဲ,
အိမ့်ဖော်တော့ ရွှေတွေမလာခဲ့ နဲ့ ဟေ့၇ည်နွေးပူနဲ့ လောင်ခံ ရတာနဲ့အိမ့်ထဲ့ ကအိမ့်ပြင်မထွက်ရတာနဲ့များနေတယ် အိမ့်ဖော်တော့လုံးဝမကောင်ပါ Mar 30, 2012 06:59 AM
Ban for myanmar maid, myanmar maid is not suitable for malaysia home. Because there is different religion and different culture.
Mar 30, 2012 01:39 AM